Arzantina: Lany ny lalàna vaovao hifehy ny Media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2009 7:10 GMT
Nolanian'ny Loholona Arzantina ny lalàna vaovao hifehy ny media mampiasa haino aman-jery, izay ahitàna fepetra vaovao maromaro momba ny Onjam-peo, ny cable, ny fampielezam-peo sy fahitalavitra avy amin'ny zanabolana. Fanampin'izay, mametraka fatra farany ambany amin'ny fandefàsana hira sy horonantsary vokatry ny tany ihany koa izy io. Ny lalàna teo aloha izay nifehy ity tsena ity hatrany amin'ny fotoan'ny jadona tao Arzantina dia nofoanana.
Sarin'ireo mpanohana ilay lalàna vaovao hifehy ny media, avy amin'i Beatrice Murch ary nampiasàna ny Creative Commons license.
Nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ilay lalàna, maro ireo fanakianana nivoaka tamin'ireo foibe fampielezam-peo sy fahitalavitra maro. Ny vondrona media malaza ao amin'ny firenena, Clarin, izay tsy maintsy hamotsotra ny sasany amin'ireo fantsona fahitalavitra, fampielezam-peo sy ampahany amin'ny mpanjifany nisoratra anarana hampiasa cable, dia nandrakotra tamin'ny lafiny miiba [nanakiana] ilay lalàna ary nanao toy izany koa ny media sasany. Kanefa, na dia teo aza ny adihevitra teny anivon'ny media, tsy nisy kosa ny fanoherana goavana natao teny an-dalambe, izay zavatra nitranga nandritry ny adihevitra tamina'ny 2008 momba ny fampakàrana ny haba aloa amin'ny vokatry ny fambolena. Fehiny, fandresena azo mora ny an'ny governemanta nanoloana ny Loholona. Aorian'ny 10 Desambra, havaozina ny Kaongresy ary ho very seza ao amin'ireo Sampana roan'ny Kaongresy ireo ny Sampana mpanatanteraka amin'izao fotoana.
Ao amin'ny blaogy Aristotelizar [es], mifantoka betsaka amin'ny fomba nandaniana ilay lalàna tao amin'ny Kaongresy ry zareo:
Ny fomba nikirakiràna ilay lalàna hifehy ny media dia maneho ny fomba fitondràn'ny filoham-pirenena mivady ny tany sy fanjakana, izay vao mainka mikiky ny fitokisana efa manify an'ireo sampan-draharaham-panjakana. Lalàna efa nilaozan'ny vaninandro izy ity ary mamoky firehana Peronism, na dia efa hita izao aza fa niova ny tontolo hatramin'izay no mankaty.
Ao amin'ny blaogy Nanopoder [es] , dia efa maminany ny fiantraikany hanao tohivakana ry zalahy, ratsy daholo, amin'ny fampihàrana ilay lalàna. Feno fomba fijery miiba ihany koa momba ilay lalàna hifehy ny media ( na ny fomba nandaniana azy tao amin'ny Kaongresy, fara faharatsiny) ao amin'ny Un Alumno Diferente [es], El Atrilero [es], sy El Observatorio Político [es].
Avy amin'ny lafiny ahitàna ireo mahita ny fahalanian'ity lalàna vaovao ity ho zavatra miabo, dia manambara i Al Centro y Adentro [es] :
Vokatra hafa mihitsy no nentin'ny fametrahana ny adihevitra mikasika ilay lalàna vaovao mifehy ny media mampiasa ny haino amanjery teo anivon'ny Parlemanta teny anivon'ny sarambabem-bahoaka. Ny ankabeazan'ireo olona any amin'ny lafy mpikatsaka fivoarana dia nanohana, mavitrika, ilay volavolan-dalàna nalefan'ny Mpanatanteraka tany amin'ny Sampana mpanao lalàna. Tamin'ity fotoana ity dia ny Afovoany Ankavia [left center] sy ny ankamaroan'ny sarangam-piarahamonina rehetra no indray nanohana ny fanapahan-kevitry ny governemanta (…). Ireo Sangany mitàna toerana betsaka dia tsy nisy afaka nametraka ny momba ny tombontsoan'izy ireo manokana (…) hisedra ny filàn'ny besinimaro.
Lahatsoratra maro hafa mankasitraka ity lalàna ity no azo jerena ao amin'ny Francisco José Bessone's blog [es], Arte y Brujería [es], Sin Zonceras [es], sy Fin del Capitalismo ¿Salvaje? [es].
Nisy fifanakalozana fomba fijery lava be tokoa tao amin'ny Twitter, izay azo aràhana amin'ny alàlan'ny teny fototra #leydemedios [es] sy #leymedios [es] (lalànan'ny media).